Wenger: Arsenal niyad ahaan ayay u burburtay - BBC Somali
Image caption Alexis Sanchez ayaa goolka keliya ee Arsenal u dhaliyay
Rajada kooxda Arsenal ay ka leedahay in ay gaarto rubuc dhammaadka Champions League, ayaa aad hoos ugu dhacday ka dib markii ay xalay guuldaro qaraar kala kulantay Bayern Munich.
Arsenal oo lixdii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay lagu reebay wareegga 16-ka - oo laba ka mid ah ay reebtay Bayern - ayaa waxaa xalay looga adkaaday 5-1, ayadoo sidoo kale 75% laga heystay kubadda.
Kulanka oo ka dhacay garoonka Allianz Arena, ayaa waxaa qeybtii hore lagu kala nastay barbaro 1-1 ah, ayadoo gool uu daqiiqadii 11-aad shabaqa Arsenal ku ruxay Arjen Robben uu barbareeyay Alexis Sanchez.
Balse markii qeybtii labaad ee ciyaarta uu garoonka dhaawac uga baxay daafaca ahna kabtanka Arsenal, Laurent Koscielny, ayaa waxaa kala daatay kooxdii oo dhan, waxaana ay Bayern weerar ku boobsiisay kooxda macallin Arsene Wenger.
Image caption Thiago Alcantara waxa uu dhaliyay laba ka mid ah goolasha Bayern
Thiago Alcantara oo loo aqoonsaday laacibka ugu wanaagsanaa kulankaasi, ayaa dhaliyay laba ka mid ah shanta gool ee ay ku badisay Bayern.
Lugta labaad ayaa 7-da Maarso waxaa lagu dheeli doonaa garoonka Emirates, waxaana Arsenal u yaalla howl aad u adag si ay ugu gudubto rubuc dhammaadka horyaalka Yurub.
Macallin Arsene Wenger ayaa kulanka ka dib sheegay in aanu sharraxi karin sida ay wax u dhaceen, balse ay kooxdiisa niyad ahaan u burburtay.
Guuldarradaasi ayaa waxa ay sii kordhineysaa cadaadiska haysta tababare Wenger, oo rajada uu xilligan ka qabo koob ay u badan tahay mid ku kooban koobka FA-ga.